February 28, 2021 714
यो अर्को फरक प्रसङ्गको समाचार पनि पढौं :प्रेम गरेर विवा’ह गरेकी श्रीमतीले छो,डेर गएपछि.. श्रीमती माडवारीको घरमा काम गर्ने गर्थिन । श्रीमानलाई पनि चासो लाग्यो कस्तो घरमा काम गर्ने रहेछन् श्री’मतीले ? त्यसपछि उनले आफु पनि हेर्न जान खोजे । यहि कुरामा उनीहरुको सम्बन्ध वि,ग्रियो । प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमती’ले छोडेर गएपछि एक महिना निकै क,ठिन भयो । संखुवासभा स्थायी घर भएका दिपक कार्कीको घ,टना हो यो । उनी काठमाडौमा बसेर ज्या’ला मजदुरीको काम गर्दै आ’एका थिए ।
विवा’ह पछि पनि उनको काम निय’मित थियो । विहान ६ वजे उनी काममा निस्कन्थे । श्रीमती पनि काममा जान्थिन् । दुई वर्ष अघि उनीह’रुको विवाह भएको हो । विवा’ह दर्ता भने भएको छैन । ससुराली तर्फ उनी’हरु जाने आउने गर्थे तर आफ्नो घरमा भने श्रीम’तीलाई लगेका थिएनन् ।
श्रीमतीले माडवा’रीको घरमा सरस’फाइको काम गर्छु भनेर सुना’एको बताए । आफु हेर्न जान्छु भन्दा माडवारीको घरमा लोग्ने मान्छे लिएर जाँदा मालि’क रि’साउँछ जान मिल्दैन भनेर उनले भनिन् । त्यही भएर उनी गएनन् । हराउनु भन्दा अघि पनि उनीहरु’बीच केही विवाद भएको थिएन । तर एक्का’सी एक महिना अघि श्रीम’ती हराइन् ।
अहिले उनी बेहाल अवस्था’मा श्रीमती आउँछन् की भनेर बाटो हेरेर बसेको बता’उँछन् । अहिले पनि आउँछ की भन्ने आश लाग्छ, अर्को’संग विवाह नै गरेर जाने खालको त थि:एन उनले भने । श्रीमती हिडेको दिन पनि उनी विहान ६ वजे नै का’ममा निस्केका थिए । श्रीमती’ले खाना बनाएर राखिदि’एको रहेछ १० वजे आएर खाना खाए ।
तर साँझ फेरी कोेठामा फर्कि’एर आए तर श्रीमती आए:को थिइनन् । श्रीमती वि’रामी जस्तै थिइन् त्यसैले उनलाई निकै चि:न्ता लाग्यो । फोन पनि अफ थियो । त्यसैले अप्ठे’रोमा परिन् की भनेर उन:लाई थप चिन्ता भयो । दुई चार दिन भैसक्यो, आफुले जानेसम्म सबैतिर खोजतलास गरिसके तर श्रीमती फेला परेकी छैनन् । प्रह’रीमा उजु’री दिएको भएपनि फेला पार्न नस’केपछि उनी मिडि’यामा आ’एको बताएका छन् । – सुदूर खबर
Prevपुण्य गौतम अब हिरो बन्दै, शुटिङमा हसाउनु हसाए…. (भिडियो सहित )
Nextछुट्टीमा घर आएका २२ वर्षीय ईण्डियन आर्मी विवेकको बाइक दु’र्घटनामा नि’धन
छोरीको खुशीका लागि दोस्रो विवाह गर्दै अन्जु पन्त, खोलिन् गोप्य कुरा (भिडियो सहित)
चर्चित कोरियोग्राफर प्रभु देवाले आफ्नै भाञ्जीसँग दोस्रो विवाह गर्दै ! (भिडियो सहित)